Google inopa GKE Autopilot, maneja kunyatsogadzirisa Kubernetes | Linux Vakapindwa muropa
Kubernetes inotambanuka uye inotakurika yakavhurika sosi chikuva kugadzirisa zvakaremerwa basa rekuremerwa uye masevhisi, inosimudzira ese ekuzivisa ekunyora ekunyora uye otomatiki. Iyo iri hombe, inokurumidza kuwedzera ecosystem ine huwandu hukuru hwe masevhisi, rutsigiro, uye maturusi.
Google yakaita chirongwa cheKubernetes chakavhurwa sosi muna 2014. Kubernetes budiriro inotora pamakumi gumi emakore neGoogle ruzivo rwekugadzirisa mutoro uye chiyero mukugadzirwa, pamwe nemazano akanakisa nemaitiro kubva munharaunda.
Google Kubernetes Injini (GKE), yaimbozivikanwa seGoogle Injini Injini, manejimendi uye orchestration sisitimu yeDocker midziyo kumhanya pane yeruzhinji masevhisi gore masevhisi.
Google Chine Injini yakavakirwa Kubernetes, Google yakavhurwa sosi kodhi manejimendi system. Mabhizinesi anowanzo shandisa Google Kubernetes Injini kuita zvinotevera:
Gadzira kana saizi Docker masumbu emidziyo.
Gadzira midziyo yemidziyo, vanodzokorora kudzora, mabasa, masevhisi, kana mutoro balancers.
Dzorerazve vanobata vanoshandisa.
Simudzira masango ako emidziyo.
Dhigi yemidziyo yemidziyo.
Vashandisi vanogona kuwirirana neGoogle Kubernetes Injini vachishandisa gcloud CLI o Google Cloud Platform Console. Vagadziri veSoftware vanowanzo shandisa Google Kubernetes Injini kugadzira uye kuyedza mitsva yekushandisa bhizinesi. Ma Administrator zvakare anoshandisa midziyo kusangana zvirinani ne scalability uye mashandiro anodikanwa emabhizinesi ekushandisa, akadai sewebhu webhu.
Google yakabvuma kuti vashandisi vane matambudziko kugadzirisa zvakanaka Kubernetes uye ndokuunza iyo nyowani sevhisi inonzi "GKE Autopilot" nechinangwa chekurerutsa kuendesa nekutarisira kwenzvimbo.
Vacherechedzi vanotaura nezveKubernetes kuti kutanga, yakawana kukosha kwakakosha munzvimbo yemidziyo yekucheresa, uye chechipiri, kuomarara kwayo kuri chipingamupinyi pakugamuchirwa uye kunowanzo kukonzera zvikanganiso.
"Kunyangwe makore matanhatu ekufambira mberi, Kubernetes ichiri kuratidza kuve yakaoma kwazvo," akanyora Drew Bradstock, mutungamiriri wechigadzirwa cheGoogle Kubernetes Injini (GKE), muchinyorwa chinozivisa Autopilot. "Uye izvo zvatakaona mugore rapfuura nderekuti makambani mazhinji anotambira Kubernetes nemaoko maviri, asi vachirwa nekuoma kwayo."
Zvizhinji zveGKE yatove sevhisi yakachengetedzwa, asi Google yakaunzwa Autopilot, yekuendesa sevhisi yeGKE, , que otomatiki anowedzera nyowani nhete nhete nhete yemaneja.
Imwe yemisiyano uripo pakati pemanyepo maviri, pakati pezvimwe zvinhu, padanho rekutungamira. Kubernetes inoshanda nema node (maseva ega), masumbu (akateedzana emaseva epanyama kana chaiwo), midziyo (panogadzirwa zvirongwa), uye mapods (boka reimwe kana akawanda emidziyo pane iyo node). Nepo GKE ichikwanisa padanho remasumbu, Autopilot zvakare inosanganisira node uye pods mune yayo yekushandisa turu.
Nzvimbo yakanakisa yekunzwisisa maficha uye kutadza kweAutopilot mune zvinyorwa zvayo, uchiona sarudzo dzakanyorwa kuti "preconfigured" (zvinoreva kuti havagone kuchinjwa) kuitira kuti maneja ave nebasa shoma.
Chaizvoizvo, iri imwe nzira yekutenga nekugadzirisa zviwanikwa zveGKE zvinopa kushomeka kushoma, asi zviri nyore. Sezvo Google ichibata zvimwe zvekumisikidza, inopa yakakwira SLA ye99.9% yekukwirisa kwema autopilot module munzvimbo dzakawanda.
"Nekuvhurwa kweAutopilot, vashandisi veGKE vanogona kusarudza pakati penzira mbiri dzekushanda, imwe neimwe iine mwero wayo wekutonga pamusoro pemasumbu avo eGKE pamwe nemabasa anoenderana neGKE
“GKE yatove kupa mamiriro epamusoro-soro anoita kuti kumisa nekushandisa sumbu reKubernetes kuve nyore uye kudhura kupfuura DIY nezvimwe zvinofambiswa; Iyo autopilot inomiririra yakakosha kumberi. Kuwedzera kune yakachengetedzwa zvizere ndege yekudzora iyo GKE yagara ichipa, uchishandisa iyo autopilot modhi yekushanda inongoerekana yaita indasitiri maitiro akanakisa uye inogona kubvisa ese mashandiro enode manejimendi mashandiro, nokudaro ichiwedzera kugona kwesumbu rako uye kubatsira mukusimbisa chengetedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Google inopa GKE Autopilot, maneja kunyatsogadzirisa Kubernetes